1 KUN FOR KVINDER OM FRUGTBARHED OG PRÆVENTION Dialogliste - Somali Introduktion og historisk rids 02:05 Kaliya loogu talo galay Dumarka 02:11 Kuna saabsan bacrimin iyo iska difaacid Speak 02:19 Laga soo bilaabo sanadkii 1900 ilaa maanta waxa ay ahaayeen qoysaska iyo heerka noloshoodu mid diiradda saaran. Horumarkii Denmark, iyo haba ugu badnaatee isbedelkii bulshada beeraleydu isu bedeshay bulsho warshadeed, ayaa aheyd mid saameyn weyn ku yeelatay fikrada, inta caruur ah ee uu qoysku doonayo in uu dhalo. Bartamihii 1950aadkii ayey dowladda Denmark bilowday inay si firfircoon u dhexgasho kaantaroolka dhalmada. Waxa ay noqotay muhim, in muwaadinad kasta lagu wargiliyo fursadaha iney iska difaacdo uur iyadoo caawimaad ka dhiganaya iska-difaac. Dhacdadii go aanka in qofku qorsheysto xaaladda reerka waxa uu ahaa sharcigii ku saabsanaa xoriyadda dilista ilma uurka ku jira,ee dhaqan galay Iyadoo ay dhinac socoto horumarka dowladda ladan ayaa waxa uu noqday fikirka isutaga jinsigu mid aad u furan. Carruurta maanta intooda badan waa carruur la dooneyey in la dhalo.. Carruur xannaano oo jooga meel howd ah iyo xannaano. Waxay qaabkooda uga sheekeynayaan, halka ay ka yimaadeen. Waxbarashadagalmo ee fasalada iskoolka Carruurta xannaanada Ilmaha1: Carruurtu waxa ay ka yimaadaan caloosha. Ilmaha 2: Haa, waxa ay ka yimaadeen halkan (tilmaan) Ilmaha 3: Haa, waxa ay ka yimaadaan xudunta Ilmaha 2: Halkan bey ka yimaadaan wey seexanayaan Ilmaha 1: Dhunkasho, dhunkasho eeg, wey isu-tagayan. Ilmaha 2: (May, may, may) Speak 03:59 Halkan Denmark maanta waa suurtagal dadka oo dhami iney helaan warbixin ku saabsan bacriminta iyo isk difaacidda. Waxbarashada is araga jinsiga waxa laga dhaqan geliyey iskuulada dowlada sanadkii 1970kii. Maanta waa qeyb waxbarasho qasab ah. Ma aha in la isku boorinayo gudashada jinsiga, laakin in loo abuuro xasilooni dumarka iyo ragga, si uu qofku kaligiis u qorsheysan karo tusaale ahaan uurka. Lærer 04:29 Side 1 af 17
2 Ma waxaad wax badan ogaan karaan marka aad wadahadashaan, mise waxaad wax badan ku ogaan kartaan, waxa aanu halkan idinku barno? Elev 1 04:42 Waxa fiican in lagu sheekaysto fasalka, maxaayeelay waxa jira waxyaalo badan, oo aan la garaneyn, oo tusaale ahaan, kusaabsan hablaha. Lærer 04:47 Waxyaalaha, ku yaala buuggan ee ku saabsan dhedigga, aad bey u wanaagsan tahay in ay habluhu ogaadaan. Elev 1 04:50 (Haa, waayo wax sidaa u sii badan kama ogon, inay tahay waxa xun ama aaney aheyn amaba sidan). Lærer (Sidaas darteed baa waxoogaa warbixin ah ka heleysaan halkan, sow maaha?) Elev 2 04:59 Marka hadda qof ay saaxiibadiis kala hadasho waxan, markaa qofku wuu u furfuran yahay waxan waayo aragnimo badana qofku wuu ku helaa. Waayo qofku wuxuu ka baranayaa wax yar, sida tusaale Markii aan u arkayey, in ay wanaagsaneyd, iyo sidaas oo kale, wax wanaagsan baa ka soo bixi kara. Lærer 05:15 Waxa la dhageysan karaa khibradaha dadka kale. Elev 2 05:18 Farqi weyn baa u dhexeeya waxbarashadan iyo sidan. Elev 3 05:22 Wey wanaagsan tahay in wax la ogaado, sida aad mar walba tiraahdo. Wax badan baa la ogaanayaa, wax badan baa laga baranayaa. Waxba faa iidaynmeyso uun in uu qofku uu aduunkiisa uun ku wareegaysto. Speak 05:38 Hadba inta aad wax ogtahay, ayaad doorataa in aad is difaacdo. Xaalad waxbarasho oo umulisadu ay wax bareyso dumar. Kvinden kroppens anatomi Jordemoder 05:44 Si aad u fahamto iska difaacidda iyo fursadaha qofku uu haysto ee ku saabsan arrinkan, waa muhim sidoo kale inaad wax ka garaneyso nolosha jidhka. 05:55 Barashada nolosha xubnaha jidhka Speak 06:01 Side 2 af 17
3 Lammaane dhallinyaro iyo sawirka gudaha iyo dibedda xubnaha jinsiga. Si aad u fahamto qaabka aad isu difaacayso, waa inaad garaneysaa shaqada xubnaha jidhka ee la xidhiidha caadada dumarka, kala tagga ugxanta iyo dib u soo saarista. Xubinta dheddiga ee dumarku waxa ay u qaybsantaa mid gudaha ah iyo mid dusha ah. Xubno jinsiga dibedda Inta u dhexeysa lugaha waxa ku yaala xubnaha jinsi ee dibedda. Waxa ay ka kooban tahay laba oo xubin jinsiga dumar, oo u muuqda in ay aad u kala duwan yihiin dumarku. Inta u dhexeysa labada dibnood waxa ku yaalla kintirka oo ah bar aad u xasaasi ah. Intaa wixii ka baxsan xubin jinsigu waxa ay ka kooban tahay kaadi mareen iyo afka siilka. Halka ugu dambeysa waxa ku yaalla daloolka dabada. Xubin jinsiga gudaha dumarka Waa qeybta gudaha jinsiga dumarka halka, caadada, qeybsanka ugxamaha iyo dib wax u soo saarku ka socdo. Oo uurku uu ka bilowdo kuna dhamaado. Jinsiga guduhu wuxuu ka kooban yahay xubinta dhedig, oo ah mid jilcan oo laastiik ah. Waana qiyaasti 10 cm.dhererkeedu. Xilliga kulanka jinsiga xubintu wey kala baxdaa weyna dheeraataa oo ballaadhataa. Ilmagaleenka, oo ah muruqa, qaada ilmaha, oo u eg khudradda canbaruudka (pære-beeyaha). Weyninkiisu waa qiyaasi gacan la duuban sida feedhka oo kale. Xilliga uurka wuxu noqon karaa mid 80 jeer ka weyn intii uu markiisi hore ahaa. Dhinac walba oo ilma galeenka ah waxa ku yaala ugxan sideyaasha. Ugxan sidayaasha weynaantoodu waa mid kuusan oo yar. Ugxan sidayaasha waxaa ku jira kumanaan ugxan ah. Bil kasta waxa horumarta ugxan. Dhanka midig iyo dhanka bidix waa ay isu bedbedelaan sameynta ugxanta. Ukun kasta waxa ay dhaxmartaa marinka ukunta oo cabirkiisu yahay qiyaasti. 10 cm. Bil kasta hal ukun ayaa ku safarta wadadan. Si ukuntii kortaaba u sameysanto, iyo haddii qof dumar ah ay uur qaadeyso, waa inay lahaataa nin. Manden kroppens anatomi Xordanadaa gudaha iyo kuwa dibedda ee nimanka. Speak 08:11 Xubnaha labeed ee dibedda ee raggu waa guska iyo xiniinyaha, xubnaha guduhuna waa marinka manida iyo qanjidhka dhuunta kaadimareenka. Side 3 af 17
4 Menstruation og frugtbarhed Marka dareenku kaco gusku waa uu isbadalaa wuu waynaadaa waxana dhaca kacsi. Marka ninku biyo baxo, waxa dhaca mani shuban. Unugyada manida waxa sameeya xiniinyaha, oo xilliga mani shubanka ku sii daaya marinka manida halkaas oo ay kaga soo darsamaan dareeraha manidu oo ka yimaada qanjidhka dhuunta kaadi mareenka kana soo gudbiya kaadi mareenka ilaa guska. Dareerahaas xiligaa yimaadana waxa lagu magacaabaa dareeraha manida. Xaddiga dareerahaha manida ee yimaada aad ayey u kala duwan yihiin. Ninba ninka kale si ayuu uga duwan yahay, marwalbana marka kale wuu ka gedisan yahay. Waxayna ku xidhan tahay da da ninka. Waana biyaha raga kuwa go aamiya in la dhalo gabadh ama wiil. Raggu waa kuwo xilli kasta wax dhali kara. Dumarkuse sidaasi maaha oo wey ka duwan yihiin. Caadada, dhalmada oo lagu muujiyey sawir. Speak 09:13 Ugxan sameysanka dumarku waa mid wakhti go an leh oo ah xilliga dumarku ku jiraan da da wax dhali karta, Taa macnaheedu waa in qofka dumarka ahi ay uur qaadi karto, xilliga ay ugxan leedahay iyo caado. Marka ay gabadhi qaangaadho, waxa bilaabma caadada. Caadadu waxa ay caddeyn u tahay, in qofka dheddiga ah ay carruur dhali karto. Caadadu waa dhiig, yimaada bishiiba hal mar, qiyaasti 13 jeer sanadkiiba, wuuna sii socdaa, ilaa dumarku ka gaaraan qiyaastii sano markaasoo dumarka caadadu ka tagto. Jordemoder 09:50 Waa muhiim, in la qoro maalinta dhiiggu bilowdo. Waa in markaa tiriyaa kaalandarka qiyaastii maalmood, sida caadiga waa maalmood inta ugxantu ka burbureyso. Markanna waa fursadda ugu weyn oo qofka dumarka ay heysato iney uur qaado. Speak10:15 Dumarka qaarkood waxa ay ka dareemaan xanuun gudaha, dhabar xanuun, madax xanuun iyo in jidhku kululaanayo. Fursadda aad heysato inaad uur ku qaado, waa ay weyn tahay xilligaa, markaa waa muhiim inaad sidaasi u ogaatid. Caadadu waa howsha, sida tooska ah ugu xiran uurka. Xaalad waxbarasho oo umulisadu sharxeyso ugxan sameysanka. Dumarka waxa u kora hal ukun bil walba. Ukuntaa kortay wey kala tagtaa waxana ay soo martaa marinka. Haddii aan lala falgelin xilligaaasi, waxa yimaada caado cusub. Side 4 af 17
5 Gabadhu waxa ay uur qaadaa, marka ninka manidiisu ay bacrimiyaan ugxanta. Xilliga isu taga marka ninku unugyada manida ku sii daayo siilka gabadha, unugyada manidu waxa ay ku yaacaan siilka ugana gudbaan ilmo galeenka iyo marinka ugxanta. Xaalad waxbarasho, oo umulisadu sharxeyso falgalada ukxamaha. Jordemoder 11:12 Unugyada manidu waa sidii rah yar yar oo daba leh oo ku dabaalanaya dareeraha manida. Wey dabaashaan oo dabbaashaan ilaa ay u gudbaan ilmo galeenka daloolkiisa iyo marinka ugxanta, hadba kii ugu dheereeya ee gala ayaa ah ka bacrimiya ugxanta. Dabadeedna dabadii ayaa ka go da waxana abuurma xuub ku wareegsan ugxanta, markaana ugxantu waxa ay bilowdaa in ay qaybsanto Speak 11:44 Ugxantu waxa ay falgal sameysaa 7 maalmood kadib iyadoo hoos ugu sii degeysa ilmagaleenka uurkuna wuu bilowday sidoo kale nolol cusub baa bilaabatay. Calaamadda ugu horeysa ee in qofka dumarka ahi ay uur leedahay, waa caadada oo aan iman. Dumarka waxa xitaa ku dhici kara labbalabbo aroorta horena waxa ay dareemayaan daal iyo dareen horraadada ah. Familieplanlægning In qofku ilmo dhalaa, waa wax qoys walba ay qorsheysan karaan. Speaken fortæller om qorshaha reerka inagoo arkeynaqoys ka adeeganaya khudaarle. Umulisada oo sheekeyneysa Speak12:18 Qorsheynta qoysku sameysanayo waxa loola jeedaa, in labada qof ee is- qabaa ay iyagu rabaan ilmo iyo ilmaha ay doonayan iyo xilliga ay doonayaan. Jordemoder 12:34 Haddii qofku aanu isticmaalin wax ka hortag ah, macquul nimmada in qoffka dumarka ahi uur ka qaado marka, ayla kulanto ninka dabcan aad bey suurta gal u tahay. Speak 12:41 Ama qofku aad ha u doono inuu uur qaado, ama ha fogaado uurka e, waa muhiim in dumarku ogaadaan goorta uurka. Xilligan waxa ay u isticmaali karaan ama kaalandar ama habka heerkulka qiyaaska. Habka kalandarka Isticmaalka kaalandarka waxa ay dumarku xisaabi karaan xilliga ay ugxantoodu kala tagayso. Gabadhu waa inay dareentaa maalinta caadada ugu horeysa. Maadaama xilliyada ugxantu isbedbedalayaan, markaa waa in ay ka feejignaato isu tag cisho ee ka dambeeya caadada bilowgeeda, haddii aanay rabin inay uur qaado. Side 5 af 17
6 Habka heer kulka Habka heerkulka waa in qofka dumarka ahi cabirtaa heer hulkeeda aroor walba, inta aaney toosin. Tirada ay ka akhrido heer kulka, waxa ay ku qoreysaa waraaq. Waraaqdu waxa ay tuseysaa, in heer kulka qofku uu sareeyo. Fursaddan in qofku uu uur qaado waa ay yar tahay, marka heer kulku uu sareeyey 3 maalmood. Labada hab ee heer kulka iyo kaalandarkuba waa kuwo aan aad loo hubin, lagumana taliyo in uu isticmaalo qofku, haddii aanu dooneyn carruur. Waayadii hore waxa uurka la iskaga ilaalin jiray in isu taga la hakiyo. Taas macnaheedu waa in uu ninku guska kasoo saaro siilka wax yar ka hor biyo bixista, si aanay manidu u galin siilka oo aanay u bacriminin ugxanta. Umuliso14:23 Laakin waxa dhici karta in qeyb dareeraha labka ahi ay toosaan, taasi oo aanu habkani u ahayn mid 100%la hubo. Abort Xaalad waxbarasho oo umulisadu ka sheekeyneyso dilka carruurta uurka ku jirta iyo soo tuuridooda Umuliso 14:34 Haddii qofka dumarka ahi uur qaadday oo ay dooneyso in ay ka takhalusto uurkeeda. Waa in ay sameysaa, waxa la yiraahdo dil ilmo uurka ku jira iyo soo tuuristiisa, dilka ilmaha uurka ku jira waxa lagu sameeyaa dalkan Denmark ilaa ilmuha uurku gaaro 12 todobaad. Waxan tirinaa uurka laga billaabo maalinta ugu horeysa caadada, inkastoo aan ognahay, inaan marka hore yeelano uurka inta kadib. Dilka ilmahaaga uurka kuugu jira iyo soo tuuridooda waxa laga helaa iyadoo loo yimaado dhakhtarka caadiga ah, halkaasoo la weydiisto foom, kaasoo qofku saxiixayo dalab ah ka takhalusida uurka. Markaas ayaa qofka loo diraa cusbitaalka ugu dhaw, kolkaa oo uu qofku dooran karo in ilmaha la soo dilo oo la soo saaro iyada oo la soo qalayo ama qofka si dwo ahaana lagaga soo ridayo. Præventionsmidler Isu-tagu xitaa waxa uu ku xiran yahay, in uu naga qaadi karo fekerka inaan uur yeelano, oo ay noqoto baashaal oo sidaa aawadeed ay wanaagsan tahay in qofku dooran karo inuu isu dhowro sida ku haboon. Barashada qaababka kala duwan ee iska difaacidda, oo aan ku arki doono sawirka. Speak 15:52 Waxa jira qaabab kala duwan oo la isu ilaaliyo maanta. Waxa loo qeybiyaa laba nooc. Habka xayiraada sida kondomka, Pessarka iyo isbiqaalka kober. Side 6 af 17
7 Kondom Waxaa kaloo jira habka hoormoonada sida kaniiniga ilaalinta, Isbiqaalka hoormoonka, P- stavga, P- ringka iyo P- blasterka. Speak 16:27 Waxa ugu badan ee la isticmaalaa waa kondomka. Xaalad waxbarasho oo umulisada ku saabsan bac. Jordemoder16:33 Laakin tan laga taxaderayaa waa, inuuu yahay mid ay ogoloaatay RFSU, iyo in taariikhdu aaney dhicin. Marka la furayana, waa muhim, in la iska ilaaliyo, in la isticmaalo cidiyaha, maa daama ay xoqi karaan. Iyo in baakada loo furo aayar, oo loo soo saaro sidan. Waana in loo dhigaa qaabka saxda ah. Waa in sidaa uu u socdo sida saxda ah. Waxa ay kordhineysaa hubaalnimada, waayo kuwa khaldama, inta badan waa marka aan loo xidhanin si sax ah. Qaar ka mid ah kondomyada, waxa ay leeyihiin meel yar oo godan Marka ragu ay kacsadaan, waxa jira dhiig ayaa kusoo yaaca guska taasi oo keenta in uu gusku waynaado sida marka dumarku ay kacsadaanba uu u waynaado kintirku, taasi oo ay tahay in uu dhiig kusoo yaacay kintirka sidaan ayaanu u weynaanayaa. Marka xubin taranku diyaargarowdo, ayaa la galin karaa cinjirka afkiisa markaa si ku dhow oo loogu sii daayo looguna durkinayaa si taxadar ah, oo faro siman ah oo aan la isticmaalaynin cidiyo. Maxaa yeelay wuu dalooshami karaa. Waa in kondomka la gaadhsiiyo ilaa halka u hoosaysa oo uu si fiican oo jidhka u dhaw uu u fadhiisto. Kondomka waa in la isticmaalo inta lagu guda jiro isutaga oo dhan. Marka la dhameeyo ee uu ninku la baxayo guska iyo kondomka waa inuu gacanta iskula qabtaa, dabadeedna si taxadar leh ayaa la isaga saarayaa, waana in la hubiyaa in manidii kondomka ay ku jirto si sax ah. Marka la dhameeyo waa in la guntaa oo la tuuraa, si aan biyuhu uu daadanin. Speak 18:54 Waa muhim, in ninku xubintiisa taranka uu goor hore saaraa, si aaney u dhicin, in ay biyuhu meesha kaga dhex daataan. Kondomka waxa la isticmaali karaa uun mar kaliya. Macmiil iibsanaya bac. Kunde 19:07 Haye, waxan ku fekerayaa inaan iibsado kondom. Apoteker (Ma mid mucayan ah?) Kunde 19:12 Side 7 af 17
8 Ma noocyo kala duwan baa jira? Apoteker 19:15 Haa, waaney wada wanaagsan yihiin hubaal oo waa hubaal. Waxa muhiim ah uun inaad si wanaagsan u isticmaasho xilliga oo dhan. Waayo waxad iskaga difaaceysaa wax walba oo dhibaato ah iyo cuduro. Speak 19:34 Kondomka faa iidadiisu waxa weeyaan inaad meel walba ka iibsan karto oo aad xili walba iibsan karto, adiga oo aan cidna weydiinin, xitaa meelaha laga adeegto ayaad ka iibsan kartaa. Markaas ayaad dabadeedna bixin kartaa lacagta. Iyadoo xataa dumarku markaasi iibsan karaan. Recept hos lægen og undersøgelse Difaaca kaliya ee labku haystaa waa cinjirka. Inta kale oo dhan dheddiga ayaa isticmaala, iyaga ayaana qorsheeya. Difaaca kale oo dhan waa in lagala xidhiidhaa dhakhtarka oo waraaq laga soo qaataa. Halkan Denmark qofku isaga ayaa dooran kara inuu lahaado dhakhtar nin ah ama mid gabadh ah. Baaritaan dhakhtareed gudaha ah. Læge 20:24 (Eeg dee). Waxan doonayaa inaan baadhitaan kugu sameeyo imika. Waxoogaa waa yara qabow, haddii aad yara nasato, waa ay fududaaneysaa. Si aad ah u qaado hawada. Talo bixin dhakhtar Speak 20:48 Is difaacidda u baahan waraaq dhakhtareed waxa ay inta badan u baahan tahay baadhitaan. Dhakhtar (Maalin wanaagsan) Bukaan (Wanaagan) Dhakhtar (Soo dhowow, halkan fariiso.) Dhakhtar 21:04 Sida aan u fahmay imika ayaa lagu guursaday. Maka fekertay, nooca aad isticmaaleyso? Bukaanka 21:14 Maya waxan jeclaan lahaa bal in aan maqlo arinkaa wax ku saabsan. Side 8 af 17
9 Pessar Waxan ku fekerayaa inaad bal wax iiga sheegto noocyada kala duwan. Dhigitaanka caagga lagu xiro ilmagaleenka. Dhakhtar 21:22 Waa hagaag, marka waxan kaaga bilaabayaa in aan wax kaaga sheego pessarka. Halka aad ka maqashay in ragu kondomka ka isticmaalo, ayey dumarkuna isticmaalaan pessarka. Pessarku waa caag sida dhawaq gudbiyaha dhegaha oo kale, ku xidhan fargal, waxa loo sameeyaa qaabkan, waa in aad marisaa kiriimka dila manida, oo aad dusha iyo hoostaba ka marisaa. Waxana loo dhigaa sidan si uu dhuunta ilmo galeenka u daboolo, si aaney manidu aanay u galin ilmo galeenka oo aanay u qarxinin ugxanta, oo aan sidaasi dabadeedna uur lagu yeelanin. Bukaanka 22:09 Ma anigaa ku hagaajinaya? Dhakhtarka 22:12 Haa, marka hore waa in aad heshaa mid ku le eg, maadaama dhedigu kala weyn yahay. Sidaas darteed waa inaan ku cabirraa, oo dabadeedna laguu dalbaa mid weyninkiisu adiga ku le eg yahay. Speak 22:30 Marka Pessarka la xidhayo, waa mihiim in lugaha middood kursi la saaro. Waa muhiim, intaa kadib in gudaha loogu gudbiyo xubinta taranka. Oo xoog loo cadaadiyo si uu here ugu gudbo. Marka caaggu hore u gudbo, markaa iska daa wuu xidhmayaaye. Dhakhtarka 22:55 Sida ugu wanaagsani waa inuu fadhiyaa, ilaa inta uu ka dilayo manida, si aaney u dhicin in waxooggaa ay ka gudbaan, inkastoo taasi mar mar uun ay dhacdo. Aadb baase loo hubaa. 8 saacadood kadib marka aad soo saarto, maydh oo meel dhig si aad mar kale u isticmaali karto. Patient 23:11 Oo ma waxan ku dhaqayaa uun biyo iyo saabuun caadi ah? Speak 23:14 Pessarku waa hab la hubo, haddii lagu isticmaalo mar walba kiriimka dila manida. Waxa la isticmaalaa ka hor kulanka, waana lagu daayaa ilaa 8 saacadood kulanka kadib. Dhalmo kasta waxa la sameeyaa cabirka pessarka oo cusub, maadaadama ilmagaleenka iyo siilku ay isbedelayaan. La iskama isticmaali karo midkii hore ama qof kale kisii. Side 9 af 17
10 Kobberspiral og hormonspiral Talobixin dhakhtareed uu dhakhtarku ka sheekeynayowaxyaabo ku saabsan xriga ilmagaleenka. Speak 23:44 Caaga yar ee balaastika ahee lagu xidho ilma galeenka ayaa loo yaqaan spiral. Dhakhtar 23:51 Waxa jira laba nooc oo caaggan ah. Caag xarrigga ee Kobber-ka iyo midka hoormoonada Bukaanka (Hagaag.) Xarigga kobarka Dhakhtarka 24:00 Caagga xarrigga ee Kobber-ka, sidan ayuu u eg yahay. Halkan waxad ka arki kartaa in uu u eg yahay, sida qaabka T. Bukaanka (Haa) Dhakhtarka 24:10 Laakin waxa jira oo kale qaabab kale. Waxa jira mid xarig naxaas ah uu ku wareegsan yahay, kaas oo loo xidho sida balaastik. Waa sidan, waxa lagu xidhaa qeybta sare ee ilmagaleenka, waxana la cabiraa inta uu noqonayo. Bukaan 24:32 Laakin miyaanay halis ahayn in ay jidhkaaga ku jiraan wax aanad garanayn, oo keeni kara dhibaatooyin iyo waxyaabo noocaas ah? Dhakhtarka 24:39 Maay, waxan aadan garanaynin ee jidhkaaga la dhex galiyay iyo jidhkaagu way isla qabsanayaan, waa sida isagoo xadhig ku xidhan yahay waxana uu is hortaagayaa, in dhibtu ku baahdo jidhka oo dhan. Speak 24:52 Waxana uu u shaqeeyaa qaab ah inuu saameyn ku yeesho ilmagaleenka, si aaney ugxan diyaargarowday ugu nagaan gudaha. Isla markaana kobbarku waxa uu bedelayaa bii ada ilmagaleenka, si unugyada manidu aanay ugu dhaqdhaqaadin si wanaagsan. Hormonspiral Dhakhtarka 25:12 Nooca kale, waa xadhigga ilmagaleenka ee hoormoonada. Speak 25:16 Xarig hoormooneedku wuxu aayar uga daadagaa qeybta uu ku dhegen yahay waxana uu saameyn ku yeeshaa ilmagaleenka. Isla markaa waxa uu sameeyaa xargag wax daboola, oo markaana aney waxbana ka gudbi karin. Spiralka waa in la bedelaa shantii sanadoodba mar. Ugu dambayn Side 10 af 17
11 waa in la bedelaa sideedii sanoba mar. Spiralka waxa xidhi karaya oo kaliya dhakhtar takhasus ku leh hawlaha dumarka, isaga oo baadhitaan sameynaya. Isætning af spiral illustreres ved hjælp af tegning og animation. Dhakhtarka 25:47 Sida xadhiga kobberka, ayaa xadhigga hoormoonada ayaa waxa la xidhaa dhammaadka caadada. Maxaa yeelay waa in qofku hubaa inaanu uur laheyn. Bukaanka 25:58 Oo sidee baan ku iskaga hubsan karaa inaanu caloosha iskaga dhex lumin ama aanu iskaba soo dhicin. Kontrol af spiral Dhakhtarka 26:04 Haa, waxa weeye, inaad halkan u timaado kaantarool caadada ugu horeysa dabadeed, si aan u eegi karno, in xadhigii halkiisii joogo in aan la jarin. Markaa baan eegaynaa oo yara durkinaynaa, si aan u hubsano, inuu weli ku dhegen yahay ilmagaleenka iyo inaanu soo dhicin. Patient 26:28 Laakiin xadhigan jidhka ku dhex jira, ka waran marka la seexdo, miyaanu iska soo bixi karin? Miyaanse la dareemayn? Dhakhtarka 26:40 Waad arki kartaa sida uu u jilicsan yahay, iyo sida uu halkan ugu dhagi karayo, markaasi lama dareemayo. P-piller og minipiller Kaniiniyaalka difaaca Speak 26:47 Waxa jira laba nooc oo kaniiniyada la isku difaaco ah: p-piller iyo min- piller. Inta badan kaniiniyada waxa ay ka kooban yihiin laba hoormoon. Dhamaan p- piller waxa ku jira laba hoormoon stregein iyo gestagein. Talo bixin dhakhtareed, oo dhakhtarku ka sheekeynayo. Læge 27:09 Waxa ay u shaqeeyaan qaab noocan ah, marka kaniiniga la qaato, in hormoonada dibadda loo saaro, si markaa hoormoonada guud ee maskaxda loo cadaadiyo, si aaney markaa u sameyn, in ugxantu aysan dhameystirmin oo aaney dibedda u soo bixin. Yacni waxa la dhaawacayaa sameysanka ugxanta. Patient (Wax ugxan ah oo soo baxaya ma jiraan miyaa?) Dhakhtarka 27:34 Wax soo baxaya oo ugxan ahi ma jiraan, ma kobcayaan oo diyaargaroobayaan umana soo baxayaan dibedda. Side 11 af 17
12 Talo bixin dhakhtareed oo dhakhtarku sharxayo sida loo isticmaalo kaniiniga p-ga. Speak 27:38 Kaniiniga P-piller waxa uu u shaqeeyaa qaab ah, in dumarku aaney helin ugxan diyaargarowda, maxaa yeelay hormoonada sare ayaan sameysmin. Kaniiniga P-piller waxa uu saameyn ku yeeshaa xuubka sare ee ilmagaleenka, si ugxanta diyaarka ah aaney ugu dhaqdhaqaaqin halkaa. Intaa waxa dheer haraga ilmagaleenku waxa uu noqdaa mid jiid-jiidma oo adag. Waxa yimaada wax dabool oo kale ah, oo ka dhigan inaan manidu gudbin. Bukaan 28:06 Markaa waxa jira saddex waxyaalood, oo uu ka shaqeeyo hal mar? Dhakhtarka 28:10 Haa, qofku waxa uu u tagayaa dhakhtarkiisa, markaa qofka waxa uu siinayaa rasiid, haddii aad doorato oo aad bilowdo maalinta ugu horeysa, ee ay kaa timado caadadu, si aan u hubsano in hormoonadu ay dhismayaan. Markaa waxad qaadaneysaa mid malin walba, inta aad ka dhammeynayso. Waxa ku jira 21 kaniini halkan, markaa waxad ka nasaneysaa todoba maalmood, oo uu dhiig kaa socdo. Bukaan 28:37 Markaa waxa la qaadanayaa miyaa saddex todobaad oo hal todobaad ayaa laga nasanayaa. Laakin todobaadka aan nasashada ku jiro, isaga ka waran? Dhakhtarka 28:43 Haa gebi ahaanba, maxaa yeelay daawadu waxa ay curyaamineysaa, in ugxantaadu ay dhameystiranto saddexdaa todobaad Laakin dabcan waxa ay ku xiran tahay hadba inta aad ku sar go an tahay. Haddii aad ilowdo hal kaniini waa inaad deg-deg u qaadataa maalinta xigta. Haddii aad markiiba hilmaanto tusaale ahaan laba maalmood, markaa waxad ku qasban tahay inaad isticmaasho kondom. Bukaan 29:03 Laakin miyaaney halis ahayn waxaas oo hoormoono ahi? Dhakhtarka 29:07 Kaniiniga P-piller waxa la horumarinayey 50 sanadood. Bilowgii xoog looma garanayn oo waxa ku jiray xadi fara badan oo hoormoonada jinsiga ah.laakiin hadda waa la horumariyey, dabadeedna waxa ku jira imika in yar oo hoormoono ah. Speak 29:23 Khaasatan dumarka ka weyn sano, ee caba sigaarka ama qaba dhiig kar, waxa loo baahan yahay inay ka fekeraan nooc kale oo isifaacid ah. Markasta ma helaysid kii kugu haboonaa, markaa waxa uu dhakhtarkaagu kuu qori karaa nooc kale oo kugu haboon. Markaas oo haday ku anfici weydo aad tijaabinayso nooc kale. Talobixin takhtareed, oo Speak 29:43 Minni-piller waxa ay ka kooban yihiin xadi yar oo hoormoonada Side 12 af 17
13 khakhtarku uu ka sheekeynaya kaniiniga yar oo muqaal aah. genstgien. Minni- piller waxa uu saamayn ku yeeshaa xuubka sare ee ilmagaleenka, si ugxanta diyaarka ah aaney ugu dhaqdhaqaaqin halkaa oo aanay u samayn dabool ilmagleenka afkiisa. Laakin waxa uu uga gedisan yahay kaniinigani p-piller, waa inaanu mar walba hor istaageyn diyaargarowga ugxanta. Dhakhtarka 30:07 Maxaa yeelayn waxa ku jira uun kaliya hal hormoon minni-piller waa in qofku qaataa mar walba. Bukaanka (Maalin walba?) Dhakhtarka oo sharxaya isticmaalka kaniiniga- yar. Dhakhtarka 30:14 Maalin walba, xitaa 21maalmood kadib, waa in la sii wadaa oo la sii wadaa iyo baako cusub, maxaayeelay waxa ku jira 28 xabo baakadan. Bukaan (Okey.) Dhakhtarka 30:25 Waa in si sax ah loo qaataa mini- piller si ka taxadaran sidii loo qaadanayey P-piller. Speak 30:31 Minni-piller waa in la qaataa maalin walba isla xilli, taas oo la ilaalinayo, maadaama habku uu yahay mid hubaal ah. P-stav Speak 30:44 P-staven waxa kale oo lagu magacaabaa hormoon staven ama emplanon, waana hab wakhti dheer wax difaaca. Dhakhtarka 30:54 Waa ul dheer oo le eg cabirka istakiinka. Bukaanka (Haa) Lægekonsultation, hvor læge fortæller om p-stav. Dhakhtark 31:03 Waxa ku jira hormoono, halkan baa la dhigaa, halkan sare. Waxa la dhigaa halka haragga hoostiisa, waxana ay keeni kartaa hormoono mar walba si, aanu markaa u iman falgal ugxan. Dhakhtarka oo sharxaya isticmaalka p-stav-gaoo ah wax jirka lagu dhex abuuro. Speak 31:22 P-stav-gu waxa uu ka kooban yahay maadada uu ka abuuran yahay minni-piller oo kale ee ah genstagin-ka. Waxa uu is hor istaagaa falgalka ugxanta, waxana uu saameyn ku yeeshaa xuubka gudaha ilmagaleenka oo ku sameeyaa dabool gudaha ilmagaleenka, si aaney manidu u marin. Side 13 af 17
14 P-ring Talobixin dhakhtar, oo dhakhtarku ka sheekeynayo faraantiga p-ga oo muuqaal ah. Dhakhtarka oo sharxaya sida uu u shaqeeyo faraantiga p-ga. P-plaster Wuxuu sii daayaa hormoono xilli walba, waxana lagu wadan karaa halkan saddex sano. Bukaanka 31:47 Muxuu noqonayaa xaalku haddii aan mar kale u baahdo inaan ilmo dhalo? Dhakhtarka 31:50 Markaa dabadeedna halkan ayaad imanaysaa oo waa lagaa saari karaa. Bil kadib waxa imanaya ugxan haddana, markaa waxad leedahay falgal ugxameed oo aad markaa qaadi karto uur. Speak 32:01 Dhakhtarka ayaa geliya oo saara waxan jirka la dhex gelinayo. Ushan qiyaasta dhererkeedu waa 4 cm, balaceeduna waa 2 mm. Speak 32:14 P-Ring oo xitaa loogu yeedho nuva-ring, waxa uu u shaqeeyaa qaabab badan oo la mid ah sida kaniiniga p-piller. Dhakhtar 32:22 Waa sida kaniinka p-piller oo kale, waxana ku jira laba hoormoon. Waxa la dhigaayaa halkaa sare si markaa loogu xidho xaggan sare. Oo Markaa ayuu sidaa u fadhiisanayaa oo lagu xagaajinayaa. Dhakhtarka 32:41 Waxana uu yaalaa halkan 3 todobaad. Marka halkii laga qaadan lahaa kaniini, ayaa 3 todobaad la dhigaa halkaa, dabadeedna 3 todobaad kadib waa la saaraa. Markaa waxa yimaadda caadadii, markaa ayaa dabadeedna la geliyaa. Speak 32:56 Faraantigu wuxuu bixiyaa hormoono, kuwaas oo mara marinka dhiigga kana sii mara haraga xubinta taranka. Hormoonadu waxa ay curyaamiyaan ugxanta, saameynna ku yeeshaan haragga ilmagaleenka oo ku sameeyaan dabool dhuunta ilmagaleenka. P-ringka lama dareemi karo xilliga isu-taga. Laakiin qofku haddii uu doonayo, wuu ka saari karaa jidhkiisa ilaa 3 sacadood welina ka hortagi karaa uur. Ka hortag kale waa p-balaastarka (balaastarka lagu dhejiyo nabarada oo kale), oo xitaa loo yaqaan EVra. Talo bixin dhakhtar oo dhakhtarku ka sheekeynayo waxku saabsan balaastarka p- iyo muuqaal.. Dhakhtarka 33:40 Waxad dooran kartaa p-.balaastarka Waxa uu u shaqeynayaa sida kaniiniga p-piller oo kale. Waa balaaster, ka kooban hormoono sida kaniiniga p-piller laba hormoon. Side 14 af 17
15 Speak 33:54 Balastarka waxa la dhigi karaa meelo badan oo kala duwan oo jirka ah, marka laga reebo horaadada hortooda. Tusaale ahaan xagga sare ee jirka, gacanta dusheeda, amaba miskaha, amaba caloosha. Waa fikrad wanaagsan in la doorto meel cusub todobaad walba, si haragaagu u nasto. Dhakhtarka 34:17 Wuxuu u shaqeeyaa, inuu dhaawaco falgalka ugxanta, si aaney ugxani u iman. Bukaan (Sidaa miyaa.) Dhakhtarka 34:24 Dhakhtarka oo sharxaya sida Todobaadkiiba mid gasho kadibna iska bedel. Waxad dooraneysaa loo isticmaalo balaastarka p-da. hal maalin todobaadkiiba isla maalintaa ayaad bedeleysa nambar laba iyo saddex. Saddexda todobaad dabadood, ayaad nasasho galeysaa hal todobaad markaa baad bilaabeysaa misana. Speak 34:42 Halkii baakaba waxa ku jirt 3 balaaster. Mid todobaad walba iyo hal todobaad oo nasasho ah. Bukaan 34:50 Oo Maxay noqoneysaa haddii aan rabo inaan maydho? Dhakhtarka 34:54 Kan waa wax la soo hubiyey, waanad ku maydhan kartaa waanad ku dabaalan kartaa. Dhakhtarka oo sharxaya sid uu u shaqeeyo balaastarka p-da. Speak 35:00 Sida kuwa kale ee ka kooban hoormoonada ayuu p-balaastarku is hor istaagaa diyaargarowga ugxanta. Wuxuu saameyn ku yeeshaa xuubka ilmagaleenka, si ugxantu aaney ugu dhegin halkaa, oo uu u sammeysmo dabool dhuuna ilmagaleenka. Gabadha waa in aanu miisaankeedu ka weynaanin 90 kg haddii ay isticmaalayso p-plaster, waayo waxa aaney helaynin hoormoono ku filan. Valg af præventionsmetode Dhamaan ka hortagista oo dhan waa ay khusaysaaye, waa in uu qofku uu aad uga fiirsado sida uu u isticmaalayo isaga oo akhriyaya waraaqaha la soo raaciyay. Qiimeyn Waxa jira habab badan oo kala duwan, oo loo isticmaalo, waana in markaa, si sax ah looga fekeraa, habka ugu wanaagsan xaaladda, aad ku jirto. Bukaa 35:52 Side 15 af 17
16 Laakin nooceen, anigu markaa doortaa? Læge 35:55 Marka qoku dooranayo, waa inuu ka fekeraa waxyaabo kala duwan. Marka hore in uu qofku leeyahay qof u khaas ah ama aanu laheyn xaas go an joogto ah. Markaa waxa jira qofka da diisa iyo caafimaadkiisa. Hababkan wax ay ku dhow yihiin 99% hubaal. Haddii aad go aansato mid ka mid ah hababkan, waxan kuu qori karaa waraaq. Nødprævention/ Fortrydelsespille Reer dhallinyaro ah oo wadada maraya, iyadoo laga hadlayo isdhowridda qasabka. Speak 36:30 Adigoo ka hortag isticmaalaya iyo adigoon isticmaalaynba waxbaa khaldami kara. Waxanad yeelan kartaa uur aanad rabin. Markaa waa inaad wax ka taqaan ka hortaga degdega ah, taasoo hakinaysa uur. Kaniiniyaalka waxa laga iibsan karaa farmasiiyada waraaq la aan Farmashiga, oo gabadh dhallinyaro ahi iibsaneyso isdifaacidda qasabka. Macmiil 36:52 Waxa ma iiga sheegi kartaa isdhowrista qasabka ah? Farmashle 36:56 Kan ugu badan ee la isticmaalo, waa kan la yiraahdo kaniiniga shaleytada. Waa laba kaniini. Waxa la qaataa hal mar oo lagu cabbaa koob biyo ah. Tan ugu muhimsan waa, in qofku u qaato sid ugu dhakhsaha badan kadib marka qoftu ay la joogtay odaygeeda, ugu dambeyn 72 saacadood kadib. Kuma shaqo laha dil ilmo uurka ku jira, kaliya waa hab, loo horistaago, uur inla qaado. Macmiil 37:24 Saameyn ma ku reebaa qofka? Apoteke 37:26 Haddii qofku mantag isku arko inta ayan ka soo wareegin 3 saacadood, waxa muuqato, inaanu kaniinigu u shaqeyn sidii la doonayey. Qofku wuxuu qaadan karaa dawo kale, haddii uu doonayo inuu wada hubsado, inuu ka horistaago uur. Speak 37:42 Isdhowridda qasabka ahi waxa ay ka kooban tahay qeyb aad u badan oo hormoono ah, oo aan caafimaadka u wanaagsanayn. Sidaas darteed waa in la isticmaalaa hal mar caadadiiba. Taa macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay bishiiba mar. Er jeg gravid? Tijaabada uurka Qofku wuxuu ku ogaan karaa inuu uur leeyahay iyo in kale isagoo Side 16 af 17
17 tijaabo dhiig ama mid kaadi iska qaada. Tan ugu badan ee la istcmaalaa waa tijaabada kaadida, oo loogu yeero tijaabada uurka. Tijaabada uurka waxa laga iibsan karaa farmasiiyada, suuqyada waaweyn iyo meelaha kale. Tavshedspligt og praktiske oplysninger Marka laga hadlayo warbixinnada ku saabsan ka hortag, uur iyo dilka ilmaha uurka ku jira, waa muhim in laga taxadaro, in dhammmaan dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaad ay leeyihiin xog dhowrid. Waxa jira meelo badan, oo qofku uu tagi karo si uu u helo warbixin ku saabsan kahortagga. Waxa jira sidoo kale sheybaaro kahortag, dhakhaatiir iyo cisbitaalo. Intaa waxa dheer oo laga helaa buugaag warbixn maktabadaha iyo farmashiyayaalka. Ilaa iyo hadda waxa suurtagal ah in laga qaato warbixin shaeybaarda badan ee dalka oo dhan, islamarkaana dhakhtarkaaga iyo dhakhtar kasta. Warbixinta iyo ogaanshuhu waa muhim, mar haddii kulan kasta ay tahay inuu ahaado mid ka madax bannaan qasab iyo cudur. Uur kastaana waa uu ahaado mid la doonayo, dhalma kastaana waa inay ahaato mid caafimaad. Side 17 af 17
Praksispersonale som kompetente rådgivere om seksuel sundhed
Velegnet til praksispersonale Praksispersonale som kompetente rådgivere om seksuel sundhed Af Lisbeth Vinzents og Kim Andreasen Rådgivning af unge kræver god kontakt og tryghed både hos den unge og rådgiveren.